ဒါရိုက်တာ မွန်း၏ လက်စွမ်း | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Creative Writing » ဒါရိုက်တာ မွန်း၏ လက်စွမ်း	10
ဒါရိုက်တာ မွန်း၏ လက်စွမ်း
Posted by moonpoem on Dec 18, 2014 in Creative Writing | 10 comments
ရိုက်ရန်လက်ခံထားသည်ကတာဝန်ကြီးသည်။နေပြည်တော်ကို သွားပြီး ခေတ်နှင့်အကိုက်ညီဆုံး သီချင်း ရိုက်ခဲ့ပါရန် ဒါရိုက်တာအစည်းအရုံးမှ မွန်းပ်ိုအမ်ကို တာဝန်ပေးကြခြင်း ဖြစ်သည်။
စဉ်းစားသည်။အမြန်လမ်းမဘေးပဲ သွားပြီး ၀ိုင်းစု၏ လမ်းမကြီးရဲ့ဘေးသီချင်းပဲ ရိုက်ရမလား ဘာလား စသဖြင့်ပေါ့လေ။
နောက်ဆုံးတော့ အကြံရပြီး ဘယ်နှစ်ပွင့်တွေ ဘယ်နှစ်ပေါက်တွေနှင့် ချိန်းတိုင်းလွဲနေသည့် လွှတ်တော်သို့သွားပြီး မဒီတို့ စုံတွဲဆိုထားသည့် လွဲနေတဲ့ ဆုံမှတ်များ သီချင်းကို ရိုက်ပြီးပြန်လာခဲ့သည်။
မွန်းပိုအမ်၏ MTV ဟုန်းဟုန်းတောက် နာမည်ကြီးသွားပြီး အဆိုတော်တွေက VCDရိုက်ရန် အပ်ကြသည်။
အဲလက်စ်က ၄င်း၏ အချစ်သီချင်း အစဖြစ်သော မွန်းကြပ်တဲ့ နေ့ရက်များမှာ ငါ့ကိုယ်ငါပြန်သုံးသပ်ခဲ့ဟု ကောင်းမြတ်ဆိုထားသော Rapစာသားကို ပုံဖော်ပေးပါရန် အဲလက်စ်နှင့်ကောင်းမြတ်က ပြောလာသည်။
ထို့ကြောင့် ခေတ်နှင့် ကိုက်ညီသော
မွန်းကြပ်ရင်း အသက်ရှူကြပ်ရင်း လွမ်းနေရှာသော model boyနှင့် ပုံဖော်မည် ပြု၏။ သို့သော် လိုင်းကားများ ပြိုင်မောင်းနေကြသဖြင့်
ရိုက်ကူးရေး model boy မှာ မွန်းကြပ်သည့်ပုံ
မပေါက်ဘဲ ခုန်ပြီးလူးနေလေရာ ကြံရာမရသည့်အဆုံး မလွမ်းနိုင်တော့သဖြင့် လွှမ်းပိုင်၏ ဒုံးဒုံးဒုံး ဒုံးပျံ
မင်းရှေ့မှာ မင်းရှေ့မှာ ခုန်ခုန်ပျံဟူသော ဒုံးပျံသီချင်းစာသားဖြင့်သာအစားထိုး ရိုက်ကူးလိုက်ရပြန်သည်။
လွှမ်းပိုင်ခိုက်သွားပြီး မွန်းပိုအမ် ပေါက်ပြန်လေသည်။ ယခုလည်း ကြည့် အဆိုတော်ကြီး
ပလေးဘွိုင်း သန်းနိုင်က အပ်ထားပြန်သည်။ ဖြည်းဖြည်းလေးနှင့် ငြ်ိမ့်ငြိမ့်လေးသီချင်းကို ခေတ်နှင့်ညီအောင် ရိုက်ပေးပါတဲ့။
ရိုက်ကူးရန် သီချင်းနှင့် အံဝင်ခွင်ကျ ရှိလှသော ရန်ကုန်မြို့ပတ်ရထားပေါ်တက်လိုက်ရာ ရထားမှာ ဖြည်းလေးနှေးကွေးသော်လည်း မငြိမ့်ညောင်းဘဲ တုန်ခါနေလေသည်။
မွန်းပိုအမ်တို့ နပ်သည်။ ကြံရာမရသည့်အဆုံး ပလေးဘွိုင်းကြီး သီချင်းအစား အဆိုတော်
အားတီ၏ သီချင်းကိုသာစာသားအနည်းငယ်ပြောင်းပြီး မသာမယာပဲ တုန်ခါနေတာပဲ ဟု
ထိုသီချင်းသည်လည်း ရောင်းမလောက်အောင် ပေါက်သွားလေရာ ယခုအခါ မွန်းပိုအမ်သည် အဆိုတော်တို့ လိုက်လံသီချင်းအပ်ချင်၍
မအားလပ်လွန်းသဖြင့် ထွက်ပြေးရှောင်ကာ ရွာထဲတွင် နာမည်ဝှက်ဖြင့်စာရေးနေသည်
Yae Myae Tha Ninn says: ဒါရိုက်တာမွန်း ပုံဖော်တင်ဆက်ကွန့်မြူးထားသည်… Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 36
Zaw Lwin says: ရှဲဒိုးရိုက်ပေါ့။
Ma Ma says: နာမည်ကြီး ဒါရိုက်တာကြီးမွန်းပိုအမ်ကို ဂေဇက်ရွာနဲ့ လိုက်ဖက်တဲ့ MTV လေး အပ်ချင်လို့ပါ။ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 12381
ခင်ဇော် says: ဟိဟိဟိ။
အာဇာနည် ရဲ့ ဖြတ် သီချင်းကို ဟိုလူဂျီးတွေကို ခွေးခေါင်းဓားစက်အောက် ထားပြီး ရိုက်ချင်ပါတယ်။
lu lu says: တော်ပါပေတယ် ဆြာကြီးမွန်းပိုအမ် ရယ်
အလင်းဆက်@မောင်သူရ says: ဖျားလောက်တယ်
၀င့်ပြုံးမြင့် says: .ဟာသဓာတ်ဆိုတာ မွေးရာပါဗီဇများလား မသိဘူး။ ဒီရွာထဲမှာ မွန်းပိုအမ် အရမ်းထူးခြားတယ်နော်။ သူ့လို ဟာသဥာဏ်မျိုးက တစ်မျိုး တစ်ဘာသာ။
moonpoem says: ရွာထဲကလူ​တွေအတွက်​ MTVရိုက်​ဖို့ အရင်​ဆုံး စိုင်းစိုင်းကို ရွာ​ဂေါ်လီသီချင်း ​ရေးခိုင်းထားပါသည်​ :-D
Ma Ei says: အလွန် အင်မတန် လက်စွမ်းထက်လှပါသော ဒါရိုက်တာ မွန်း ပါတကား….
kyeemite says: .ဒါရိုက်တာဂျီး မွန်းပိုအမ်ကို တို့ဂဇက်ရွာသူသားများတွေ့ဆုံပွဲ အမ်တီဗွီ ရိုက်ဖို့ အပ်ပါတယ်ဗျို့ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike LeaveaComment Cancel replyYou must be logged in to postacomment.	My Points	You need to be logged in to view your points.